I-Gelatin edliwayo, i-Pharmaceutical Gelatin, i-Collagen-Gelken
Siyakwamukela ku-Gelken Gelatin
Isungulwe ngo-2012, iGelken Gelatin ingumkhiqizi onguchwepheshe ekukhiqizeni ikhwalithi ephezulu yezemithi i-gelatin, i-gelatin edliwayo kanye ne-hydrolyzed collagen. Imikhiqizo isetshenziswa kakhulu kwezokwelapha, i-capsule, imboni yokudla, izimonyo, imikhiqizo yezempilo nezinye izimboni.
Kanye nokuthuthukela ngokuphelele kulayini wokukhiqiza kusukela ngo-2015, indawo yethu isezingeni eliphezulu emhlabeni. Sinohlelo oluphelele lokuphathwa kwekhwalithi kanye nokuphathwa kokuphepha kokudla okuqinisekiswe yi-ISO9001, ISO22000, FSSSC22000, GMP. Ithimba lethu lokukhiqiza lisuka efektri ephezulu ye-gelatin enolwazi lweminyaka engama-20. Manje sesinomugqa wokukhiqiza we-3 we-gelatin onamandla wonyaka wamathani ayi-15,000 nomugqa owodwa we-Hydrolyzed Collagen onamandla angama-3000tons wonyaka…
Insiza Yomhlaba Wonke.
Amandla wokukhiqiza we-15000mt wonyaka.
Ubuchwepheshe bokukhiqiza obuthuthukisiwe kanye nesilingo seminyaka engama-20.
Ukukhiqizwa Okuzinzile Nokugcwele Okugcwele.
Thatha wonke umthwalo kwimikhiqizo yethu nensizakalo.
Ama-400 + wama-SOP aqinisekisa ukuhlinzeka ngokuzinza ...
Insizakalo esebenza kahle.
Isikhathi sokuhola esisheshayo nesizinzile.
Ithimba lokuthengisa elinolwazi & nokusekelwa kobuchwepheshe obuchwepheshe.
Imikhiqizo yeGelken isetshenziswa kakhulu kuma-capsules aqinile, ama-capsules athambile, amaphilisi, uswidi we-gummy, i-ham, i-yogurt, ama-mousses, ubhiya, ijusi, imikhiqizo ekheniwe ...
I-Collagen Yezithasiselo zezempilo
Ishidi le-Gelatin Lekhekhe Le-Mousse
Vakashela iXiamen Gelken
Izindaba zeGelken Gelatin
Eminyakeni yamuva nje, umphakathi wamazwe omhlaba ubhekele kakhulu ukuthuthuka okusimeme, futhi kwafinyelelwa ekuvumelaneni emhlabeni wonke. Uma kuqhathaniswa nanoma yisiphi isikhathi emlandweni wempucuko yanamuhla, abathengi ...
I-Healthplex Expo 2020 ibanjwe ngoNovemba 25, 2020
I-Healthplex Expo 2020 iqoqe ngempumelelo yonke imikhiqizo emikhulu yezempilo neyondlayo evela ezingxenyeni ezihlukene zomhlaba. Yayibanjelwe eNational Convention and Exhibition Centre (eShanghai) kusuka ngoNovemba 25 kuya ku-27th ngo-2020 cishe izinsuku ezintathu. Umbukiso, ukuhlanganisa ...
Ukukhula Kwemakethe yeCollagen
Ngokwemibiko yakamuva yakwamanye amazwe, imakethe ye-collagen yomhlaba kulindeleke ukuthi ifinyelele ku-US $ 7.5 billion ngonyaka ka-2027, ngenani lemali elinganiselwa ekukhuleni ngonyaka elinganiselwa ku-5.9%. Ukukhula kwemakethe kungabangelwa ukufuna okunamandla kokubambisana ...